Azonao atao ny manamarina raha misy iPhone mihidy amin'ny iCloud | Vaovao IPhone
Araka ny fantatrao tsara, tamin'ny volana Janoary ny orinasa Cupertino dia nanapa-kevitra ny hijanona tsy hanolotra serivisy an-tserasera izay nanampy betsaka an'ireo mpampiasa iPhone voalohany hanao fividianana tanana faharoa, ary izany dia Apple dia manana serivisy fikarohana ho azy noho ny fanakanana ny iCloud amin'ny alàlan'ny tranokalany manokana. Na izany aza, apetraka ny zava-drehetra, ary efa hitanay, misaotra an'ireo mpampiasa, fomba iray ahafahana mahazo izany mombamomba izany amin'ny fomba hafa. Azonao atao ny manamarina raha misy iPhone mihidy na tsy amin'ny alàlan'ny iCloud amin'ny fomba mora indrindra ary amin'ny alàlan'ny Apple mihitsy.
Raha ny marina, rehefa hanazava azy io isika, dia mety ho toa valalan'olona tena izy, fa ny media kosa toa UnblockBoot hitan'izy ireo fa mandaitra toy ny tsotra.
voalohany, ny zavatra ilainay dia ny IMEI na MEID an'ny iPhone na ilay tiana hojerena dia ho hitantsika ao anaty boaty na amin'ny fampahalalana momba ny fitaovana ao anaty ny fikirana izany. Raha vantany vao azontsika io, dia handeha amin'ny tranokalan'ny orinasa Cupertino izahay amin'ny alàlan'ny ITY FIAINANA ity.
Ankehitriny dia tsy maintsy misafidy ireo fizarana mifandraika amin'izany isika, tsy misy alalana, ny zava-dehibe dia ny mandroso hatrany ary ankehitriny ho fantatrao ny antony. Vantany vao omenao anay ny fahaizana "mandefa azy ho fanamboarana", dia hampiditra ny kaody ao anaty boaty lahatsoratra aseho amin'ny sary lohateny. Avy eo, Raha miatrika fitaovana iray voasakana amin'ny alàlan'ny iCloud isika dia hisy fampitandremana izay manondro fa tsy ho afaka handefa ilay fitaovana isika raha toa ka mihidy amin'ny iCloud izy io ankehitriny.
Amin'izany fomba izany dia afaka maka fepetra voalohany isika raha ny amin'ny fahazoana iPhone fanindroany, hahazoana antoka fa tsy omena "jackpot" isika.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » About us » Ity no ahafahanao manamarina raha voahidy amin'ny iCloud ny iPhone
berenice gonzalez almendarez dia hoy izy:
Manana iphone 6s mihidy aho plus hadinoko ny teny miafiko
Nantsoiko ireo paoma fa tsy manome valiny ahy izy ireo fa manana ny tapakila mividy aho ary mandefa sary
Inona no azoko atao hamaha azy?
Mamaly an'i Berenice gonzalez almendarez
Ny GPU an'ny iPhone manaraka dia hifantoka amin'ny Augmented Reality
Mora amin'i Siri ve ny mianatra fiteny vaovao? Ahoana no anaovan'i Apple azy hampianarana anao